Iwe unofarira mabhasikoro, kuchovha bhasikoro uye nzendo dzebhasikoro?
Webhusaiti zano - mablog
BikeHike ipuratifomu apo ini, anoda bhasikoro uye kunyanya kushanya kwebhasikoro, ndinogovera ruzivo runobatsira pamisoro yakafanana.
Panguva imwecheteyo, pfungwa yesaiti ndeyekuita kuti vanhu vane zvido zvakafanana vabatane, vataure uye vagovane ruzivo kunyanya kuburikidza nemablog.
Uyu ndiwo mutsauko mukuru kubva kumaforamu, uko pasina kushanda kuri nyore kwekuzvitaura, kwaunogona kugadzira musoro, unogona kuzvibvisa kubva pazviri, asi zvese izvi zvichapararira munzvimbo dzayo dzakavhurika. Nesu, pfungwa dzako dzese uye zvinoonekwa zvenguva huru zvichachengetwa munzvimbo imwechete. Iwe une yako pachako nzvimbo, iyo iwe yaunoda kugovana nevamwe, semuenzaniso, nekupa chinongedzo kune shamwari, kana iwe unoda kuisiya iwe wega newe. Ndakabika tii, ndikatora mabhanzi, uye munguva yechando inotonhora unorangarira kunakidzwa kwawakaita muchirimo. Dururira cola paaizi pazuva rinopisa rezhizha uye zorodza paunenge uchiverenga zviitiko zvako zvechando.
Iri imhando yedhiyari yega, inongotumirwa munharaunda yevanhu vane pfungwa dzakafanana, nekuda kwekuti ichagamuchira mhinduro ine moyo.
Kuti uite izvi, iwe unongoda kunyoresa, mushure mezvo iwe unogona kutanga yako yega blog.
Kugadzirira rwendo rwebhasikoro
Iyo saiti ine ruzivo rwekuti, kwekutanga, inokukurudzira kuti uende parwendo rwako rwekutanga bhasikoro, uye yozokuudza magadzirirwo ayo. Pano iwe uchadzidza kuti ndeipi nzira yebhasikoro yekutora, yekutora newe, nzira yekurongedza, nzira yekufambisa bhasikoro rako, yekubika, nezvimwe.
Hatizoregereri nyaya yekusarudza bhasikoro uye zvimwe zvikamu, accessories, midziyo. Semuenzaniso, ndeipi kamera iri nani kutora kukwira? Kunyange pano pane zvakawanda zvokukurukura.
Enderera mberi. Kuti bhasikoro rive rakanakira uye risingakuvadzi kune hutano, unofanirwa kujairana nehunyanzvi hwekuchovha bhasikoro, sarudza saizi yebhasikoro uye gadzira yakakodzera.
Zvechokwadi, iwe unofanirwa kukwanisa kugadzirisa bhasikoro nemaoko ako pachako, kuichengeta uye kuitarisira. Zvinyorwa zvedu zvichakubatsirawo kuwana unyanzvi hunobatsira hwakadaro.
Kana iwe waifarira saiti, kana iwe ukaona tarisiro mukusimudzira nharaunda yevateveri zviitiko zvekunze, mabhasikoro, kushanya bhasikoro uye kuchovha bhasikoro, wobva wajoinha, koka shamwari, siya chinongedzo kune saiti, pazvinogoneka, uye tobva tagona. shingairira kukura, kurudzira mararamiro ane hutano, hongu uye kungoti "hupenyu huchava nani, hupenyu huchawedzera kunakidza"
Zvese zvakanaka uye rombo rakanaka!